Galaxy Note 10 iyo 10 Plus: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista | Androidsis
Galaxy Note 10 iyo Xusuusin 10 +: Samsung-dhamaadka sare ee cusub
Sida la xaqiijiyay dhowr toddobaad ka hor, Galaxy Note 10 ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay maanta oo ay taariikhdu tahay 7da Ogosto. Samsung waxay soo bandhigeysaa heer sare oo cusub, taas oo nooga tagaysa laba qalab qaybtan. Toddobaadyadan waxaa jiray xogo badan oo ku saabsan dhammaadka sare ee cusub ee sumadda Kuuriya. Laakiin xilligii ay soo bandhigeysay ayaa ugu dambeyn timid.
Saakay processor-kii aan ku arki doonno taleefannadan ayaa la soo bandhigay, Exynos 9825. Hadda waan ognahay inta kale ee qeexitaanka noocyadan kala duwan ee Galaxy Note 10, kaas oo nooga tegaya qaabka caadiga ah iyo nooca loo yaqaan 'Plus', maadaama ay horeyba u daatay bilihii lasoo dhaafay. Maxaan ka filan karnaa noocyadan?
Isbedelka ugu horreeya ee aan ku daawan karno taleefannadan ayaa loola jeedaa naqshadeynta. Tan iyo markii ay raaci doonaan dabayaaqada Galaxy S10, oo ay ku jiraan daloolka shaashadda. In kasta oo ay tahay naqshad ka duwan tii hore, laakiin taasi waxay ka dhigaysaa inay u muuqato wax aan ahayn moodallo hore oo noocan ah ee Galaxy Note. Samsung waxay cusbooneysiineysaa qaabkeeda qaabkan si cad, si ay u muujiso isbeddelka qoyskan taleefannada.
Exynos 9825: processor-ka Galaxy Note 10 waa rasmi
1 Qeexitaannada Galaxy Note 10
2 Caddaymaha Galaxy Note 10 +
Qeexitaannada Galaxy Note 10
Ugu horreyntii waxaan helnaa qaabka caadiga ah, taas oo magaceeda u bixineysa dhammaadka sare ee sumadda Kuuriya. Dhamaad heer sare ah oo keena isbeddelo muuqda marka la barbardhigo moodelkii sanadkii hore, marka laga reebo naqshada. Shirkaddu waxay cusbooneysiineysaa qeexitaankeeda, waxay soo bandhigeysaa kaamirooyin cusub waxayna naga tagtay qaab aad u xoog badan oo isku dheelitiran, oo loogu yeeray inay ka dhex muuqdaan qaybta qiimaha leh ee suuqa. Waxaan kaa filan karnaa waxqabad aad u wanaagsan. Kuwani waa qeexitaankiisa:
Faahfaahinta farsamada Samsung Galaxy Note 10
Tusaale Galaxy Note 10
Nidaamka hawlgalka Android 9.0 Pie leh One UI oo ah lakab qaabeyn ah
Screen 6.3-inch AMOLED Infinity-O oo leh xal 2280 x 1080 pixels (401 PPP)
Gacaliye Exynos 9825 / Snapdragon 855
Kaydinta gudaha 256 GB
Kaamirada gadaal Ultra Wide Angle (123º) oo leh 16 MP sensor iyo aperture f / 2.2 + Wide Angle (77º) oo leh 12 MP iyo aperture isbeddel ah oo u dhexeeya 1.5 iyo 2.4 + 12 MP sensor oo leh muraayad muuqaal ah iyo f / 2.1 aperture
Kaamirada hore 10 MP oo leh fur f / 2.2 leh autofocus iyo xagal toogasho 80-degree ah
Xuduudaha kala duwan 4G / LTE Bluetooth 5.0 WiFi 802.11 a / c GPS GLONASS
Tilmaamo kale Qalabka sawirka faraha ee lagu dhisay shaashadda NFC Face unlock shahaado IP68
Batariga 3.500 Mah oo leh 25W lacag deg deg ah
Cabbirada 151 x 71.8 x 7.9 mm
Peso Gram 167
Qiimaha 999 euros
Dhamaadka-dhamaadka sare ee Samsung wuxuu nooga tagayaa waxoogaa isbeddelo ah marka loo eego sanadkii hore. Mid ka mid ah xooggeeda ayaa ah kamaradda gadaal ee seddaxda ah, taas oo ah mid ka mid ah isbeddelada waaweyn. Shirkaddu waxay si adag uga go'an tahay inay siiso magac iyo hagaajinta kaamirooyinka heerkan dhamaadka sare. Dareere saddex-geesood ah oo ah 16 + 12 + 12 MP, oo leh dareewal kasta oo loogu talagalay ujeeddo kale, oo ay sii kordhisay sirdoonka farsamada. Dareenta faraha ayaa ku hoos yaal shaashadda kiiskan.
S-Pen waa mid kale oo ka mid ah halyeeyada waaweyn, isagoo soo maray horumarro kala duwan. Maaddaama ay shaqeyneyso xitaa iyadoo shaashadda la xiray, hubaal waxay kordhineysaa isticmaalkaaga. Waad ku mahadsan tahay, hadda waxay noqon doontaa suurtagal in lala falgalo dib-u-soo-celinta multimedia, kaamiradda la toogto, la xakameeyo mugga, ama xitaa la soo dhaweynayo meelaha leh qoraalka.
Caddaymaha Galaxy Note 10 +
Dhinaca kale waxaan ka helaynaa qaabka Plus kiiskan. Samsung ayaa markii ugu horreysay nooga tagtay laba nooc oo kala duwan oo noocan ah, iyada oo la hirgelinayo Galaxy Note 10 Plus, oo ah nooc la wadaaga waxyaabo badan oo ay wadaagaan taleefankii hore. In kasta oo xaaladdan ay ka ballaaran tahay xagga cabbirka, taas oo keenta khilaafaadka qaarkood, sida batteriga, tusaale ahaan. Kuwani waa qeexitaankiisa buuxa:
Faahfaahinta farsamada Samsung Galaxy Note 10 Plus
Tusaale Galaxy Note 10 Plus
Screen 6.8-inch AMOLED Infinity-O oo leh xal 3040 x 1440 pixels (498 PPP)
Kaydinta gudaha 256 iyo 512 GB (Kordhinta microSD ilaa 1 TB)
Kaamirada gadaal Ultra Wide Angle (123º) oo leh 16 MP sensor iyo f / 2.2 aperture + Wide Angle (77º) oo leh 12 MP iyo aperture isbeddel ah inta udhaxeysa 1.5 iyo 2.4 + 12 MP sensor oo leh muraayad indhaha ah iyo f / 2.1 aperture + Dareemo VGA leh VGA
Batariga 4.300 mAh oo leh 45 W lacag degdeg ah
Cabbirada 162.3 x 77.2 x 7.9 mm
Peso 198 Garaam
Qiimaha Laga soo bilaabo 1.199 euro
Galaxy Note 10 + waxaa loo soo bandhigay qaab xoogaa dhameystiran. Samsung ayaa ahmiyad gaar ah siisay kaamirooyinka noocyadan sare, kuwaas oo Waxay ku leedahay afar dareemayaal dhabarka, ugub ah dhamaadka-sare ee sumadda Kuuriya. Saddexda dareemayaal waaweyn waxay la mid yihiin kuwa laga helay moodeelka caadiga ah, laakiin sidoo kale waxaan leenahay afaraad, taas oo ah dareeraha ToF, oo loogu talagalay in lagu cabbiro qoto dheer. Dhamaan kaamirooyinka waxaa taageera sirdoonka macmalka ah.
Batariga Galaxy Note 10 + wuxuu leeyahay awood dhan 4.300 mAh, kana weyn tan caadiga ah. Intaas waxaa sii dheer, kiiskan waxaan ka heli oo leh 45W si dhakhso ah ugu shaqeeya taleefanka, taas oo ah lacagtii ugu dhaqsaha badneyd ee calaamaddu waligeed ku isticmaasho mid ka mid ah taleefannadeeda. Sidii horeyba uga dhacday Galaxy S10, dareeraha sawirka faraha wuxuu ku yaalaa shaashadda hoosteeda. Waxay umuuqataa inay isku shuruud tahay kiiskan.
Faahfaahin kale oo muhiim ah kiiskan ayaa ah taas Nooc leh 5G ayaa na sugaya. Sidii horay loogu xaman jiray, waxaan helnay nooc ka mid ah nooca Plus oo wata 5G. Qeexitaannadiisu waa isku mid, kaliya inay leedahay moodeellada lagama maarmaanka u ah ee ka dhigaya kuwo is waafajiya.
Ku saabsan qiimaha ay qaadan doonaan Galaxy Note 10 waxaa jiri lahaa xan badan. Bishii Luulyo, qiimaha la sheegay waa la sifeeyey in Samsung ay aasaasayaan noocyadan taleefannada ah, oo muujiyey koror qiimo leh. In kasta oo toddobaadyadan ay jireen noocyo kala duwan oo daadis ah iyo warar xan ah oo arrintan la xiriira. Nasiib wanaag, ogeysiiskan rasmiga ah waxaa lagu soo afjaray wararkaas xanta ah.
Xaaladda Galaxy Note 10 waan helnaa leh nooc gaar ah xagga RAM iyo kaydinta, sida lagu arkay qeexitaankiisa. Qaabka waxaa lagu sii deyn doonaa midabada Aura Glow, Aura Black iyo Aura Pink, illaa iyo intii la ogaa. Waxay ku imaan laheyd qiime dhan 959 euro.
Dhinaca kale waxaan helnaa Galaxy Note 10 +. Xaaladdan oo kale waxaan helnaa laba nooc oo heer sare ah, maaddaama aan haysanno nooc leh 5G, taas oo ku saabsan Spain waxay u gaar noqon doontaa Vodafone sida moodooyinka kale si aan u dooran karno midka aan ugu jecelahay arrintan. Qiimahooda rasmiga ah waa sida soo socota:
Qaabka caadiga ah (512 GB) waxaa lagu qiimeeyaa 1.109 euro
Nooca leh 1 TB ee keydinta ayaa ku kacaya 1.209 euro
Nooca 5G ee gaarka ah ee Vodafone wali qiimo rasmi ah ma leh
Samsung waxay horeyba u xaqiijisay in tan cusub ee sare Waxaa la iibin doonaa Ogosto 23 si rasmi ah. In kasta oo kuwa daneynaya ay kaydsan karaan laga bilaabo maanta, markay dhacdadu dhammaato, suurtagalnimada ayaa la furi doonaa. Maxaad u maleyneysaa ku saabsan dhamaadka-sare sare ee sumadda?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Galaxy Note 10 iyo Xusuusin 10 +: Samsung-dhamaadka sare ee cusub
Huawei Y9 Prime 2019 wuxuu helayaa EMUI 9.1
Sida ugu macquulsan Android dhexdeeda talaabada talaabo talaabo ah